Na-achọpụta na Blue Yeti | Martech Zone
The Martech Zone Radio show a na-anya ọtụtụ ndị na-ege ntị (ihe karịrị 1,500!) Ma na-ewu ewu kwa izu. Na ewu ewu na-abịa na-akatọ… na Dave Woodson kwuru, Podcaster seasoned, nyere anyị oge siri ike (kwesịrị) nke ọma gbasara ogo Podcast anyị. Anyị na-eji a Blue Snowflake USB Igwe okwu n'ọfịs anyị - nke na-anaghị atọ ụtọ maka acoustics ma ọlị.
Ihe si na ya pụta bụ na igwe okwu na-atụnye ọpịpị ọ bụla na tebụl, mkpu nju oyi nke friji anyị, na obere komiti na-ata ahụhụ. N’ime ụlọ dị jụụ nke nwere ihe ndị na-adọrọ adọrọ, igwe okwu ahụ na-eme ihe dị mma. Karịsịa ebe ọ bụ na ọ nwere ike ibugharị ma nwee ike ịdaba na akpa gị. Mgbe otu afọ nke njem, m na ihuenyo ama apụ na chọrọ ụfọdụ nrapado ka ịgbakwunye ya azụ. Oge maka igwe okwu ọhụrụ!
Dave kwadoro Blue's Yeti USB Igwe okwu anyị wee tinye ya n'usoro ebe ọ bụ na ọ bara uru… naanị ihe karịrị $ 100. Ọ bịarutere tupu ihe ngosi redio ọhụrụ anyị na-atụle Ihe ngosi email ohuru nke Facebook ya na ụfọdụ ndị ọkachamara n’ọrụ ụlọ ọrụ.
Chaị, ezigbo anụ mmiri! Igwe okwu ahụ na-arụ ọrụ dị egwu ma ogo ihe nkiri ahụ emeela ka ọ dị ntakịrị. M ka kwenyere na anyị nwere ihe ịma aka ụfọdụ na tebụl ọla na ụlọ mgbago anyị na-egosi na in mana anyị ga-aga n'ihu na-emezi ya karịa oge. Dave ekele nke ukwuu maka nkwanye.
Igwe okwu nwere ụdị ọrụ 4 dabere na ndị na-ege gị ntị. Ọ nwere ọtụtụ ntọala, dabere na ọnọdụ nke ụda ị na-anwa iburu - stereo, cardiod, omnidirectional, and bidirectional. Nke a bụ nkọwa nke Ntọala Yeti na ngwa sitere na saịtị Blue:
Anyị ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'ọfịs iji meziwanye acoustics, mana enweghị m obi abụọ ọ bụla na anyị hụrụ igwe okwu Podcasting kwesịrị ekwesị. Nke a bụ nnukwu ngwaike na nnukwu ọnụ ahịa!
Tags: Ahịa Podcastokwu